Izy rehefa hiverina ao amin'ny 1 sy 2 Tes | Apg29
Izy rehefa hiverina ao amin'ny 1 sy 2 Tes
Efa ao amin'ny toko voalohany izay miresaka momba ny fototry Paoly fampianaran 'ny Fanahy Masina na ny Antenimieram-fibebahana, araka izay milaza tamin'izany andro izany inona no ho ny fiangonana fanantenana sy fiandrasana, izany hoe ny fivere
Voalohany, ny fampakarana fianarana lehibe tokony ho anisan'ny ny fototra ny Fivoriambe sy nitory. Izany ihany koa ny hetsika izay misaraka sy miavaka raha oharina amin'ny Jesosy tonga teto an-tany hita maso, ary ho solon'ny famaritana 'ny Tompo nidina avy tany an-danitra, izay mba retrieve sy twitch ny fiangonana ho an'ny tenany. Ny fampakarana ihany koa ny fihaonana amin'ny olon-tiantsika, izay niara amin'ny fampakarana tamin'ny maty.
Rehefa miaraka amin 'ny 1 Korintiana 15, toy ny taratasin'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika, ny sasany tamin'ny taratasy amin'ny mamaritra ny tsara indrindra ny fiverenan'i Jesosy. Taratasy valiny dia ahitana zavatra izay ny fisandratana dia, ary rehefa mitranga.
Izany no ny famerenana an'i Paoly taratasy roa izay manome antsika ny fahatakarana ny fotoana farany, ary ny fifandraisana misy eo andron'i Jesosy Kristy, izay ihany koa uppryckelsens andro, ary ny andron 'ny Tompo no ho avy amin'ny fitsarana Jesosy ho amin'izao tontolo izao. Ny taratasy mampahery antsika tamin'izany andro izany mba hiaina ao foana fiandrasana hiverenan'i Jesosy, ary manome antsika mafy sy mazava fampanantenana mba ho voaro amin'ny fahatezeran 'Andriamanitra.
Lafika amin'ny taratasy
Izao no nosoratan'i Paoly ireo taratasy ireo dia fotoana fohy taorian 'ny efa nanorina ny fiangonana tany Tesalonika. Tamin'ny dia misionera faharoa nataony, i Paoly tonga tao an-tanàna, izay nisy fiangonana niorina (Asan'ny Apostoly 17: 1).
Noho ny fanoherana ny filazantsara lasa voatery nandositra i Paoly, ka nanoratra taratasy mba hampaherezana ny fiangonana rehefa avy Timoty efa reny ny momba ny faharetana, ny finoana sy ny fitiavana.
Fampakarana - fotopampianarana manan-danja
Maro ny olona manala ny fampakarana ho toy ny zava-dehibe fotopampianarana na fampianarana. Ny Kristianina sasany mandà izany fotsiny, na midika fa ho azon'ny ihany an'ohatra na an'ohatra. Ny hafa indray mino fa ny fampakarana tsara fotsiny, fa fa nanaloka ny fotopampianarana manan-danja kokoa ho toy ny Andriamanitra telo izay iray izany na batisa.
Avy eo, i Paoly sy nanorina ny fiangonana mandra-nanoratra ireo taratasy ireo, dia ny 6-12 volana. Noho izany dia amin'ny teny hafa iray fiangonana mbola kely fa i Paoly nanoratra ho any. Fa na dia ireo olona ireo no somary vaovao amin'ny finoana, miafina na lazaina an'i Paoly tsy hampianatra na miresaka momba ny hiverenan'i Jesosy.
Efa ao amin'ny toko voalohany izay an'i Paoly miresaka ny fototry ny fampianaran 'ny Fanahy Masina (andininy faha-5), na Fivoriambe fibebahana (andininy 9), ka raha mitoetra dia milaza azy io ho ny fiangonana fanantenana sy fiandrasana, izany hoe ny fiverenan'i Jesoa (and 10).
Teraka nandritra ny fanenjehana
Ny fiangonana tany Tesalonika dia teraka sy nonina tany fanenjehana noho ny finoany. Efa niaina izany koa fanenjehana ny Jiosy, fa na i Jesosy sy ny mpaminany teo aloha za-draharaha (v14).
Ireo taratasy ireo dia ho fampaherezana ho an'ny fiangonana hanohy handeha amin'ny finoana sy ny faharetana ao amin'ny Tompo. Nandritra ny fanenjehana lehibe sy ny fijaliana izy ireo nandray ny filazantsara, ary efa nibebaka noho ny sampiny. Izao izy ireo dia nafindra ny Tompo sy nanompo ny olona, ​​ary hany Andriamanitra marina.
Inona no atao hoe ny fampakarana?
Raha tiantsika ny hanazava ary farito ny zavatra ny fampakarana dia, misy lafiny maro sy ny lafiny ny misy afaka milaza:
Tsy misy mialoha mahatratra fampanantenana momba ny fampakarana ny fiangonana izay midika fa "mananontanona" na mifandray. Midika izany fa ny fiangonana dia tsy maintsy miaina ao foana fiandrasana ny fiverenan'ny Tompo, ary fa i Jesosy no momba ny hitondra antsika hody. Na dia Voalaza fa ambony sy ao amin 'ny fofonaina ny fahoriana lehibe, izay midika fa anisan'ny dingana izay manomboka ary manomboka ny andron'ny Tompo na ny fahoriana. Indray andro izany no manome antoka ny fiangonana mba tsy ho anisan'ny.
Ny fampakarana - HARPAZO
1 Tesaloniana 4: 16-17 - Fa rehefa mafy didy, ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra,, Tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra. Ary ihany izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana. Avy eo isika, izay velona ka mbola mitoetra no hakarina (harpazo) eny amin'ny rahona hiaraka aminy hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka. Ary toy izany mandrakariva no ho amin'ny Tompo.
Ny teny hoe "fampakarana" dia avy io andinin-dia nadika avy amin'ny teny grika hoe "harpazo" mba "hakarina." Izao Teny Izao "harpazo" dia in-13 ihany no voalaza ao amin'ny NT ary ihany no ampiasaina ao amin'ny 1 Tesaloniana 4 mifandray amin'ny fampakarana ny fiangonana.
"HARPAZO" (manan-pad-zo) no teny grika, ary midika hoe "poach" maka na hahatakatra tampoka. Harpazo lasa amin'ny teny Latina hoe "raptus," izay kosa dia lasa ny teny hoe "fampakarana." Ao amin'ny Soeda no nandika ny hevitry ny hoe "ny fampakarana" amin'ny fampakarana.
Mahaliana ny mahita fa ny teny no ampiasaina ary voafaritra ao ny NT satria manampy antsika hahatakatra ny hevitry ny teny, ary ny fahatakarana ny fotoana l'Assemblée lasa nakarina ho any amin'ny Tompo mba hitsena azy eny amin'ny habakabaka. Isika tojo ny teny harpazo na ao amin'i Jesosy, Paoly, Filipo, Jaona Mpanao Batisa sy Jesosy mampanantena fa ny zanany.
2 Korintiana 12: 2 - Mahalala olona anankiray ao amin'i Kristy, izay ho efatra ambin'ny folo taona lasa izay nakarina (HARPAZO) niakatra ho any amin'ny lanitra fahatelo - na tao amin'ny tena, na any ivelan'ny tena, tsy fantatro.
I Paoly dia nakarina ho any an-danitra izay lasa tafiditra amin'ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Toy izany koa ny teny ampiasaina HARPAZO koa Jesoa ao amin'ny Apokalypsy mba hamaritana ny Fiakarana araka ny fitsanganana amin'ny maty
Apokalypsy 12: 5 - Koa niteraka ny zaza, zazalahy izy, izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by, ary ny zanany novonjena faingana nakarina (HARPAZO) an'Andriamanitra sy ny seza fiandrianany.
Matthew 11:12 - Ary hatramin'ny andron'i Jaona Mpanao-batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra iharan'ny herisetra ihany, sy izay mampahory herisetra (HARPAZO) izany.
In mifandray amin'ny Jaona Mpanao-batisa ny fanompoana lasa teny HARPAZO ampiasaina ihany koa. Rehefa i Jesosy tao an-tranomaizina, dia toy ny hoe miresaka momba an'i Jaona mifandray amin'ny (tsara) herisetra sy ny jiolahim-boto izay mampahory ny lanitra. (Maka azy an-keriny MLG. Translation) ho fampiharana zavatra an-keriny / hery no hevitry ny teny hoe HARPAZO.
Rehefa tonga ny Tompo mba hanangona ny vahoakany, dia handrombaka ny Antenimieram-hery.
Asan'ny Apostoly 8:39 - Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano nandriatra (HARPAZO) Tompo any Filipo sy ilay tandapa tsy nahita azy intsony izy, fa nanohy ny diany sady nifaly.
Filipo efa alalan'ny anjely no nantsoin 'ny Tompo izy ka nidina ny lalana izay mandeha avy any Jerosalema ho any Gaza. Aiza Filipo mamely tandapa etiopianina iray, izay an'i Filipo nitory ny filazantsara. Ary rehefa vita Filipo efa tanteraka ny asa fitoriana, fitoriana ny filazantsara, ary nanao batisa ilay tandapa, Filipo vokany nentiny 'ny Tompo ho any amin'ny toeran-kafa eto an-tany.
To dia hoentina amin'ny teny hafa mba ho lasa nifindra tao amin'ny asa fanompoana ambony kokoa ho an'i Jehovah, na eto an-tany na ny any an-danitra.
Tsy misy maharombaka anareo ho afaka tamin'ny tanan 'ny Tompo
Jaona 10: 28-29 - Izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy, ary tsy hisy handrombaka (HARPAZO) azy amin'ny tanako. Inona no nomen'ny Ray Ahy dia lehibe noho izy rehetra; ary tsy misy maharombaka (HARPAZO) azy amin'ny Raiko an-tànan'olona.
Izao no mahagaga andalan-teny izay mampiseho ny Mpiandry ny fony noho ny ondriny. Mahafantatra antsika Izy, dia hihaino ny feony ary hanaraka azy. Ny fampanantenana fa manome antsika ny hoe tsy misy olona tokony ho afaka 'haharombaka "amin'ny tànany izahay. Ny Ray ny Zanaka dia tsy afaka mangalatra indray.
Manome antsika ny famonjena sy ny fiarovana tokoa fa na inona na inona afaka hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Jesosy. I Satana na ny toe-javatra, amin'ny teny hafa, dia aza haharombaka antsika hiala aminy.
Fampakarana dia mifandraika
1 Tesalonianina 4:15 - no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo: isika, izay velona ka mbola mitoetra ho-pihavin'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry
Lalana tamin'ny andron'i Paoly ny Tompo ny fiverenan'ny akaiky, ary mampirisika ny fiangonana hiaina amin'ny fiandrasana foana i Jesosy any an-danitra.
Rehefa miresaka mandika ny fotoana izay iainantsika, ary mino fa isika no taranaka izay hiaina ny fiverenan'ny Tompo, dia satria isika mampitaha ny faminaniana toetra ny fahoriana. Noho ny famantarana dia hitantsika fa ny Tompo dia manakaiky ny andro, ary ny fahaterahana hitombo mihetsi-jaza. Amin'ny teny hafa, anatiny sy ivelany famantarana izay milaza fa ny faha-70 sy ny tamin'ny herinandro lasa ny taona no manakaiky, ary dia toy izany ihany koa ny fampakarana ny fiangonana.
Rehefa miaina ao anatin'ny fiandrasana isan'andro ho an'ny Tompo ho avy indray, dia mamorona na ny förväntningens fifaliana sy ny faniriana ny ho avy.
Ny fanantenan'ny mahatonga ny ampakarina efa vonona, dia ho velona fiainana masina, ary notendrena ho any amin'ny manaraka mpampakatra. Koa miteraka ilaina ny very ny olombelona izay tian 'ny Tompo mba hanatratra ny fitiavana sy manan-kery hamonjy. Mahatonga izany ho tsara sy fitaovana maro be ny hoe tsy momba ny zava-misy marina ara-panahy fa an'arivony ny olona miaina isan'andro, raha miditra ao mandrakizay izy ireo tsy misy an'Andriamanitra sy tsy misy fanantenana.
Ao amin 'ny vanim-potoana, tamin'ny faramparan'ny 1800 ny, rehefa nanangana ny Tompo indray ny saram-pianarana ny mifandray fampakarana, izao tontolo izao amin'izao fotoana izao niaina iray amin'ireo misiônera lehibe indrindra amin'ny tantara sy ny fotoana fitoriana. Miaraka amin'ny faminaniana Teny dia tonga velona, ​​afo nandoro ny filazantsara manerana izao tontolo izao.
Ao Amin'ny Taratasy ho ny fiangonana tany Tesalonika fa Paoly taratasy any am-parany. Afaka manantena àry isika fa i Paoly sady mampianatra sy niresaka ny zava-nitranga lehibe fampakarana, ny Antikristy performanc sy ny fahoriana.
2 Tesaloniana ihany koa ny iray amin'ireo mahabe resaka indrindra taratasy izany teo NT, izay mifandray amin'ny fotoana hevitra ny fampakarana 'ny fiangonan' Andriamanitra.
An paroasy fakan-tahaka
Amin'ny lafiny maro, ny fiangonana, ka tokony ohatra ho an'ny mpino hafa (1 Tesalonianina 1: 8). Izany dia ny fiangonana izay nonina tany foana fiandrasana ny fiverenan'ny Tompo. Efa nibebaka tamin'ny sampy, ary niandry an'i Jesosy ankehitriny fanambarana avy any an-danitra (1 Tesaloniana 1:10).
Ao amin'ny taratasiny voalohany fa i Paoly nampirisika Fivoriambe mba hanohy hanao ny asany ara-dalàna dia ho velona fiainana, tamin'izany andro izany fa efa miandry ny Tompo (4: 11-12). Ary mampionona azy tamin'ny milaza amintsika fa isika indray hahita olon-tiany izay efa nandeha an-trano eo anoloantsika, rehefa hitsangana ny maty miaraka amin'ny fampakarana ny velona.
Taratasy faharoa nataon'i Paoly
Faharoa nataon'i Paoly taratasy voasoratra tokony ho enim-bolana tatỳ aoriana, noho ny voalohany. Hoy izy manoratra ho an'ny fiangonana mba hanitsiana sy manitsy tsaho sy ny fampianaran-diso izay efa notantanako ao am-piangonana.
Ny fiangonana dia raiki-tahotra, ary sahiran-tsaina momba ny andron'ny Tompo, ary ny domstid izay ho avy manerana izao tontolo izao. Ny tsaho sy ny lazaina ho taratasy avy Paoly, nihevitra ny fiangonana ankehitriny fa ireo dia efa ao anaty izany domstid izay ihany koa fahoriana.
Izany no zavatra izay efa mazava Nanazava i Paoly na am-bava sy amin'ny alalan'ny ny taratasiny voalohany ho an'ny Tesalonianina. Koa hita amin'izany fa nanoratra ity taratasy ity mba hanazavana sy hanitsy ireo tsy fifankahazoan-kevitra.
Andron'ny Tompo, ny fahatezerana sy ny Antenimieram lasa
Ao amin'ny faharoa nataon'i Paoly any am-parany taratasiny ho an'ny Tesalonianina Tena efatra faritra izay te-hanoratra sy mifantoka amin'ny dia ny andron'ny Tompo, ny fahatezerana (Orge), dia izay mihazona niverina, ary ny teny hoe "apostasia", izay midika fandaniam-poana na ny lasa (fampakarana) .
Farany, dia mijery kely indrindra ao amin'ny 2 Tesalonianina 2:13, taorian'ny fandinihana akaiky kokoa dia mahagaga andininy izay miteny sady manamafy sy mamintina ny fampianaran'i Paoly ho an'ny Fivoriambe amin'ny fisandratana alohan'ny fahoriana.
Voalohany, zava-dehibe ny hanazava ny zavatra ny andron'ny Tompo marina moa. Maro ny olona manao ary maneho ny andron'ny Tompo ho toy ny voafetra sy voafaritra tsara andro 24 ora, izay mitranga amin'ny faran'ny ny fahoriana, rehefa hita miverina Jesosy. Izao no midika fa ny andron 'ny Tompo sy ny fampakarana dia mitovy dika sy mivoaka iray.
Angamba no tena andininy voalaza fotsiny ny 1 Tesalonianina 5: 2, izay miresaka momba ny fampakarana mifandray amin'ny andron'ny Tompo. Toy ny andron'i Jehovah Toy izany koa fa tonga i Jesoa toy ny "mpangalatra amin'ny alina" izay mampifandray anao matetika afangaro ireo zava-nitranga roa.
Fa ny famerenana ny andinin-teny sasany izay milaza ny Andron'ny Tompo dia maneho fa tsy miresaka fotsiny iray andro, fa amin'ny fotoam-pitsarana roa manarona ny fahoriana, hita maso i Jesosy hiverina sy ny Fanjakana Arivo Taona.
Manamafy i Paoly ny Baiboly momba ny andron'i Jehovah, ka hilaza ny momba izany ianao toy ny andro fandravana sy ny fanaintainana. Taty aoriana ao amin'ny 1 Th 5: 9, dia mampiasa ny teny i Paoly "fahatezerana fitsarana" (orway) mamintina ary mitovy dika amin'ny fotoana.
I Jesoa Kristy amin'izao fotoana izao
Filipiana 1: 6 - Azoko antoka fa Izay nanomboka asa tsara ao anatinareo koa ny tsy maintsy hahatanteraka izany mandra-pihavin'ny andron'i Jesosy Kristy.
Andron'i Jehovah, dia hamoaka ny fahatezerana sy ny domstid izay mivoaka ny tany nandritra ny fotoana manomboka amin'ny fisandratana (ny fanombohan'ny fahoriana) sy ny Arivotaona. Rehefa miresaka momba ny fampakarana ny fiangonana izay tsy andron'ny Tompo, fa ny anaran 'i Jesoa Kristy amin'izao fotoana izao.
I Jesoa Kristy amin'izao fotoana izao dia tsy voalaza ao amin'ny Testamenta Taloha, araka ny manana ny tena miafina hatao, izany hoe, ny fahamarinan 'ny NT fiangonana, ary ny fampakarana ny voninahitra.
The NT fanambarana
I Jesoa Kristy amin'izao fotoana izao dia iray ihany NT fanambarana. Andron'ny Tompo dia tsy fanambarana fotsiny Testamenta Taloha, fa ny fitsarana fotoana hamaliana ny jentilisa-tsipiriany kokoa ao amin'ny NT indrindra voafaritra ao amin'ny Apokalypsy toko faha-6-19. "Andron'ny Tompo" momba ny tany sy ny olona eto an-tany i Jesoa Kristy amin'izao fotoana izao raha ny amin'i NT Antenimieram fampakarana sy ny fiomanana eo anatrehan'ny Ray any an-danitra.
Raha ny an'i Jesoa Kristy amin'izao fotoana izao, dia benämnelse tamin'ny andro i Jesosy no ho tonga amin'ny rahona mba haka ny fiangonana heriny tanteraka ny tenany.
Betydningen ao amin'ity andininy ity dia ny Fanahy Masina, tahaka ny tamin'ny Pentekosta nanomboka ny asany amin'ny alalan'ny fisafidianana ny olona any an-danitra, dia tanteraka manaova ity vahoaka ity hery feno akaikin'ny Jesoa Kristy amin'izao fotoana izao, izay manaraka an'i Jesosy mba hitondra an-trano ny fiangonana ho any an-danitra fonenany - izay izao no mitranga alohan'ny andron'ny Tompo.
Voatahiry avy amin'ny Tompo fahatezerana (Orge)
1 Tesaloniana 1: 9-10 - Ny dia miresaka momba ny fomba dia noraisin'ny anareo sy ny fomba nitodika tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo ny Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny Zanany avy any an-danitra, izay nitsangana tamin'ny maty, dia Jesosy izay namonjy antsika amin'ny (EK) ny fahatezerana (Orge).
1 Tesalonianina 5: 9 - Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana hijaly (Orge) fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika
Ny iray amin'ireo fotopampianarana trib talohan'ny tohan-kevitra manan-danja ho an'ny fampakarana ny fiangonana teo anoloan'ny fahoriana, dia ny hoe i Jesosy no voavonjy sy namonjy ny fiangonana amin'ny fahatezerana ho avy. (Eng. Fahatezerana ho avy).
Ilay teny grika tany am-boalohany ny fahatezerana dia Orge, sy ny teny anglisy midika hoe "dia midika, fahatezerana, firehetam-po sy ny sazy. Koa izao no fotoana ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny sazy ho haidina amin'ity tanana ity an-tany.
Ny foto-kevitra ankapobeny
Samy amin'ireto andininy ireto izany sy ny zavatra izay ho foto-kevitra miverimberina ao amin'ny NT dia ny Fiangonana dia tsy maintsy hijaly ny amin'ny fahatezerana, fa raha tokony ho voavonjy sy voatahiry amin'izy io.
Ny teny hoe "amin'ny" (EK) Tsy mahazo mandalo atỳ, fa kosa mba hanalavitra ny tenany na inona na inona avy amin'ny olona na ara-bakiteny. Mampiasa izany koa i Jesosy rehefa teny dia mampianatra fa "manaisotra ny hazo fisaka amin'ny masonao" ao amin'ny Matio 7: 5 Ny andry na ny splint no nesorina avy eo ara-batana andro lavitra, ary tsy anisan'ny intsony ny maso.
Raha nahazo izany fampanantenana ho mpanjenjena sy narovana ny fahatezeran 'Andriamanitra, ahoana ny fiangonana ho tonga mandritra ny fahoriana?
Voavonjy amin'ny fahatezerana
Apok 6: 15-017 - Ny mpanjakan'ny tany, ny lehibe sy ny jeneraly, ny manan-karena sy ny matanjaka, ny andevo afaka dia niery tao amin'ny lavaka sy tao hantsana, ka hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy; "Mianjerà aminay ka afeno izahay ny tavany mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny Zanak'ondry ny fahatezeran'Andriamanitra (Orge). fa ny fahatezerany andro lehibe dia tonga (aorist), ary iza no mahajanona?
Voalohany ti no sendra izany teny izany fahatezerana (Orge) ao amin'ny Apokalypsy dia ny tombo-kase fahenina. Ny matoanteny hoe "avy" dia ny matoanteny (aorist) hevitra sy ny zavatra izay efa nisy teo aloha, fa ankehitriny dia hita fa ny tombo-kase fahenina.
Rehefa manao jery todika amin'ny lasa tombo-kase izay efa eo anatrehan'ny Fahenina, dia ihany koa ny tsy sarotra ny mahita fa io fahatezerana efa nandritra ireo dimy voalohany tombo-kase, izay ankoatra ny zavatra hafa dia niafara tamin'ny eran-ady, ara-toekarena hyperinflation sy ny mosary ary otrik'aretina mipoitra; izay nahatonga fa ny ampahefatry ny mponina eto an-tany ny maty.
Ny faran 'ny kiboriny
Apok 15: 1 - Ary hitako fa, indro lehibe sy mahatalanjona iray hafa famantarana any an-danitra: anjely fito amin'ny loza fito, ny farany, Satria ireny ny fahatezeran 'Andriamanitra tonga ny tanteraka
Maro no mino fa ny fahatezerana io dia anisan'ny voalohany ny fahatezeran'Andriamanitra hita any amin'ny faran'ny Apokalypsy, fa ny Baiboly mazava tsara fa ny loza fito farany, fa tsy ny fivoahana niandohan'ny ny fahatezeran'Andriamanitra. (Apok 15: 1)
Up 19:15 - Ny tafiky ny lanitra dia nanaraka Ary, samy nitaingina soavaly fotsy, ka dia nanao akanjo fotsy, hariry madinika madio. Ary nivoaka avy tamin'ny vavany tonga ny sabatra maranitra, mba hamely ny firenena, ary Izy hanapaka azy amin'ny tehim-by, ka tramples Andriamanitra, dia ny Tsitoha, ny divain'ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra (Orge) famiazam-boaloboka
Rehefa tapitra ny fahoriana vita ny fahatezeran 'Andriamanitra, ary tojo azy io ho fotoana farany, rehefa tonga i Jesosy mba handresy sy hahazo fandresena ny fahavalony amin'ny Hara-magedona.
Raha toa ny fiangonana dia manana ny teny fikasana ny ho voatahiry avy domstid voalohany na ny farany, noho izany dia tena mazava fa ny Fiangonana dia tsy afaka hijanona eto an-tany, rehefa ny tombo-kase voalohany dia tapaka. Manamafy izany i Paoly tatỳ aoriana, ao amin'ny 2 Tesaloniana, izay mampianatra momba ny zava-nitranga tsy maintsy hitranga alohan'ny domstid io dia hitondra ny tany.
Apokalypsy 3:10 - Noho ny nitandrina ny teniko momba ny faharetana, dia hiaro anao sy hamonjy anao ho voavonjy amin'ny andro fakam-panahy, izay ho tonga amin 'izao tontolo izao sy hitondra ny olona ho amin'ny fitsapana.
Toy izany koa fampanantenana nomena ho an'ny fiangonana tany Tesalonika koa ny fiangonana tao Filadelfia ao amin'ny Apokalypsy.
Satria efa nitandrina ny tenin'ny Tompo momba ny fiaretana, ny Tompo dia miaro ny Township ny (oaka, nivoaka avy) ny ora fitsarana izay ho avy eto an-tany. Ny teny hoe "amin'ny" (EK) dia teny iray ihany ny 1 Tesalonianina 1:10 fampiasana, ary izany dia mampiseho fa ny fiangonana dia tokony ho nihataka, ary raha mbola lavitra amin'ny prövelsens.
Ny fampanantenan 'ny Tompo ao amin'ny fiangonana Filadelfia tsy mametra ny fotoana ny fahatezeran'Andriamanitra, fa ny teny fikasana Fivoriambe mba ho voaro amin'ny ora rehetra ny fitsarana izay ho avy eto an-tany.
Apostasia - fako na lasa
2 Tesaloniana 2: 3 - Aoka tsy hisy hamitaka anareo na amin'inona na amin'inona. Fa, aloha, tsy maintsy ho avy ny efitra sy ny lehilahy mpandika lalàna, ilay zanaky ny fahaverezana, miharihary avy hatrany
Dia mampianatra ny fiangonana i Paoly momba ny fanapahan-kevitra manan-danja sy hevitra, izany hoe ny fiangonana fa tsy afaka manantena fa ny andron'ny Tompo (ny fahoriana) ho tonga eo anatrehanao ny fisehoan-javatra lehibe telo hitranga:
Ny efitra (apostasia) tsy maintsy ho avy, ny olona iray izay mihazona niverina dia tsy maintsy ho tonga any amin'ny toerana, ary ny olona laglösthetens (Antikristy) tonga dia miharihary aloha (Apok 6: 1)
Ny hevitry ny teny hoe apostasia
Ny teny grika no nadika foana, famadihana sy ny miodina dia ny teny hoe "apostasia". Ny anarana hoe "apostasia" dia avy amin'ny matoanteny "afistämi" izay huvudbetydning dia "mampihetsi-po" na "hifindra zavatra avy amin'ny toerana iray hafa." Ny teny dia ampiasaina manokana mifandray amin'ny tsy fihetsehan'ny avy amin'ny toerana iray ny iray hafa, na raha lasa, na dia tsy mitovy amin'ny olona iray.
Hitantsika apostasia ny teny ihany no indroa isan-NT, izay misy ny hafa dia ao amin'ny Asan'ny Apostoly 21:21 izay miresaka momba ny "handao an'i Mosesy," na ny fivadiham-pinoana avy any Mosesy. Raha ny anarana apostasia dia fahita firy ao amin'ny NT, misy ny matoanteny amin'ny afistämi fa ny teny dia teny ny fotoana dimy ambin'ny folo. Ihany amin'ny toe-javatra telo dia manondro ny fivadiham-pinoana ara-pivavahana. (1 Tim.1, Heb 3:12 sy 2 Tim 2: 9).
Ao amin'ny tranga roa ambin'ny folo no sisa afistämi "mba handao ny an," na dia olona (Lioka 4:13; Asan'ny Apostoly 12:10), avy amin'ny tsy fahamarinana (2 Timoty 2:19), avy ao amin'ny tempoly (Lioka 2:37) na tao amin'ny tena (2 Kor 12: 8).
Ny teny voalohany
Ao amin'ny Baiboly anglisy, ny Malagasy Bible, misy fanamarihana ambany pejy: "Ny mety ho dikan-ny apostasia ranomandry: Fiaingana (ny fiangonana).
Ny fito voalohany avy amin'ny teny anglisy 1394 - 1608, ny rehetra dia nadika avy amin'ny teny hoe "lasa" (miala) mikendry ny fampakarana. Nahoana no lazaina fa ny King James Version toy ny iray amin'ireo fandikan-teny voalohany indrindra mampiasa ny teny hoe fako fa tsy lasa?
Apostasia fampandrosoana ara-tantara
1576 dia tonga ny Katolika fandikan-teny ho amin'ny teny anglisy ihany koa ny antsoina hoe "Version Bible". Io no fandikan-teny voalohany izay nampiasa ny teny hoe fako fa tsy lasa (lasa).
Nampiasa fandikan-teny io Kotolikerna mba hanondro ny "fako" izay nialoha ny 1500 ny alalan 'ny Fanavaozana Protestanta.
Mifanohitra amin'izany, tamin'ny 1611, rehefa King James Bible navoaka nohavaozina izy ireo mpandika teny ny fandikan-teny avy amin'ny lasa teo aloha ny mandany mba milaza ny Eglizy Katolika sy ny fampianarany ho toy ny Apôstazia Lehibe. Dia toy izany no tsy mianatra na ny hevitry ny teny hoe apostasia izay nanapa-kevitra izany, fa izay Instruction ho an'ny Fiangonana Katolika.
Ny fampakarana - manokana hetsika
Inona marina no nataon'i Paoly rehefa nampianatra momba ny hetsika manokana izay hitranga aloha kelin'ny ny fahoriana?
Apostasia grika izany hoe manana voafaritra (dia ny teny grika hoe tsy ara-dalàna) izay mahatonga Paoly manondro manokana hetsika efa voafaritra mialoha, fa tsy zavatra izay mitranga rehefa mandeha ny fotoana.
Maro ireo soratra masina miresaka sy mijoro ho vavolombelona momba ny fivadiham-pinoana amin'ny andro farany. (1 Tim 4: 1-2, 2 H 3: 1, 1 Jaona 2: 1). Ny olana dia mba tsy ho soratra masina dia manome fanohanana ho lao iray manokana na ny hetsika mba hanasongadinana manokana sy mazava ho famantarana ho an'ny mpino rehetra any amin'ny fotoana farany. Andinin-teny rehetra izay miresaka momba ny fivadiham-pinoana amin'ny andro farany dia ankapobeny, ary tsy manondro ny hetsika manokana. Araka ny fantatsika, dia kosa ny efitra sy ny hiodina amin'i Jehovah ny fotoana rehetra. Joda koa dia miteny momba izany efa nitranga tamin 'ny fotoana' ny apostoly. (Joda V 17 FF)
Fampakarana, na izany aza, dia voafaritra hetsika, ary zavatra izay tsy hitranga intsony nandritra ny vanim-potoana. Ho toetra tsy manam-paharoa izay mampiseho fa ny farany sy ny famaranana ny fotoana efa tonga.
Mandritra izany fotoana izany, dia ny olana rehefa tsy i Paoly no voalaza fandaniam-poana izao ao amin'ny taratasiny voalohany ho an'ny fiangonana.
Ny taratasy faharoa ho an'ny fiangonana dia fanazavana ny zavatra voasoratra ao amin'ny voalohany sy faharoa fiavian'i Kristy zava-nitranga iray izay sady nilaza sy mazava ho an'ny tany Tesalonika. Large Saika isan-toko ity taratasy ity dia miresaka momba ny fiverenan'ny Tompo, ary ny andro farany fampandrosoana, nefa tsy milaza na inona na inona momba ny fandaniam-poana toy ny zava-dehibe tsy manam-paharoa sy ny fisehoan-javatra izay hialoha ny Tompo, ary ny andro ho avy ny antikristy.
Noho izany dia akaiky kokoa ny mino fa i Paoly dia manondro ny fiavian 'ny Tompo ao amin'ny 1 Tesalonianina 4:17 tsy ny manokana fako izay andinin-teny tsy manonona raha tsy izany.
Mihazona indray izy
2 Tesaloniana 2: 6-7 - Fantatrao ahoana izany toy izao mihazona azy indray mba hahafahany mipoitra raha tsy rehefa tonga ny fotoana. Efa, ny zava-miafina ny fandikan-dalàna fiasan'ny. Izay izao dia mihazona azy ihany indray ho nanala niala tamin'ny lalana.
Andininy 4-8 ao amin'io toko io ihany mampahafantatra ny antikristy, ary izay mihazona azy indray izy mba tsy hiseho eo anatrehan'i ny fotoana. Ankehitriny, manoratra 2014, ary afaka hanamarina fa na dia izay mihazona hiverina eto raha mbola ny Antikristy tsy mbola tonga nanatrika.
Ny fitsipi-pitenenana lasa indray mihazona voalaza fa samy "azy io" sy "izy". Ny teny hoe fanahy ao amin'ny Fanahy Masina dia ny teny hoe "pneuma" tamin'ny teny grika, izay teny tsy firaisana ara-nofo. Mandritra izany fotoana izany fa ny Fanahy Masina ihany koa Andriamanitra, dia nofaritana ho toy ny "hoy izy". Nisy maro ny vinavina amin'ny inona no mihazona ny antikristy, fa raha samy book X-SAMPA tsy misy afa-tsy ny Fanahy Masina.
Ny Fanahy Masina ao amin'ny Fiangonana
Ny Fanahy Masina dia mifandray akaiky amin'ny fiangonana, ary efa hatramin'ny andro Pentekosta ao amin'ny APG Chapter 2. GT toa ny Fanahy Masina koa eto an-tany, fa amin'ny fototra ambony. Toy ny hataony ao amin'ny fahoriana.
Ny Fanahy Masina no manohy ny asany ao amin'ny olona ao amin'ny fahoriana, fa avy uppryckelsens fotoana avy any ambony. Noho izany, isika dia mahita intsony ny Fanahy Masina asehon'ny toko 3 amin'ny Bokin'ny Apokalypsy, ary any an-dafin'i. Ao amin'ny taratasy ho any amin'ny fiangonana fito, dia mihainoa izao teny izao: Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny fiangonana. Rehefa avy Toko faha-3, dia ny Fivoriambe ny fampakarana dia tsy misy intsony ny Fanahy Masina izay miteny. Apokalypsy 13: 9 - Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino. Ary tsy dia ny Fanahy Masina, izay azo avy amin'ny hafa ny famonjena sy ny fitsarana hafatra ny olona ao amin'ny fahoriana, avy eo dia hatao fa tsy ny anjely. (Apok 14: 6-7).
Raha hampivory ny fiangonana lasa tratra ny Fanahy Masina Tsy manan-toerana mba hiasa avy amin'ny Antenimiera dia bebe kokoa no hany tempoly izay fantatr'Andriamanitra amin'izao andro izao. (1 3:16). Ny hany fiangonana izay dia aseho ao amin'ny fahoriana dia skökoförsamlingen, ary enga anie ny Fanahy Masina dia tsy miasa ao, na avy any ivelany.
Fampakarana ao amin'ny 2 Tesaloniana 2:13
2 Tesalonianina 2:13 - Fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo ry rahalahy malalan'ny Tompo, satria Andriamanitra hatrany am-piandohana nifidy anareo hahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny Fanahy sy ny finoana ny marina.
Transsexuelle Eng. "Fa isika kosa mba tokony misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malala ny Tompo, Tsara Noho ny nifidy, ny voa voalohany, fa fanafahana amin'ny fanamasinan'ny Fanahy sy ny finoana ny marina."
Ny zavatra voalohany izay zava-dehibe ny mifandray amin'ny lazaina amin'io andininy io fa dia voalaza ao anaty mifandray ireo taratasy any am-parany mampahafantatra ny fampianarana ny "andron'ny Tompo."
Ny antecedent toko (Chapter 2) Nanana fotsiny i Paoly dia nampianatra ny fiangonana momba ilay lehilahy mpandika lalàna, izay maintsy ho avy aloha handroso aseho ampahibemaso. Hitantsika Antikristy niseho tamin'ny voalohany tombo-kase, ary rehefa miseho ny soavaly fotsy.
Mety ho izany fankasitrahana noho ny famonjena izay maneho Paoly eto amin'ity andininy ity, dia ny famonjena fa tantly nampianatra roa taratasy izay mamoaka ny fahatezeran 'Andriamanitra? Amin'ity tranga ity, dia ny fandraisana ho mpikambana iray hafa i Paoly loha hevitra miverimberina ny fiangonana, izany hoe ny Tompo ny famonjena sy ny fiarovana ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fahoriana.
Voafidy ho amin'ny famonjena
Mba hahatakarana izany teny izany ny famonjena (soteria) ny ampiasan'i Paoly, ianareo koa mba manana ny heviny araka ny fotoana famantarana tany.
Ny teny hoe famonjena (Gr. Soteria) manana ny heviny manaraka in ENG; deliverence, fiarovana, ny fiarovana, ny famonjena: fanafahana avy amin'ny fametavetana ny fahavalo.
Avy amin'ny teny ampiasaina ao amin'ny Testamenta Taloha, dia hitantsika fa ny hevitry ny teny hoe fanovana, ny hafa mialoha isika dia ara-potoana momba ny rehefa ny taratasy dia voasoratra.
Ny famonjena ao amin'ny Testamenta Taloha
Ao amin'ny Testamenta Taloha, no ahitantsika ny teny in-78, ary matetika no mifandray amin'ny teny hebreo Yeshu'ha. Ny ankamaroan'ny fotoana ny teny ampiasaina ao amin'ny Testamenta Taloha, dia mifandray amin'ny ara-batana na famonjena avy amin'ny fahavalo tsy maharitra fitsapana ho an'ny Isiraely.
Hitantsika izany ankoatra ny hafa ho an'ny Isiraely ny fanafahana avy tany Ejipta, eto, raha miditra amin'ny Ranomasina Mena. Ampiasaina koa izy io, rehefa dia azon'i Davida koa sy afaka amin'ny fanenjehana Saoly, sy ny famonjena ny Isiraely, hatramin'ny fahavalony voajanahary tahaka ny Filistina, Moabita sy ny Edomita.
Isaia dia mampiasa io teny io mba hilazana na ny famonjena ny Isiraely niherina ny Mesia, fa koa mba hilazana ny ara-panahy sy ny fifanekena vaovao fa ny Tompo dia hanorina tamin'ny Isiraely.
Ny famonjena ao amin'ny NT
Ny Testamenta Vaovao dia ny teny hoe "Soteria" ampiasain'ny na loza ara-batana (Asan'ny Apostoly 7:25, 27:34), fa ambonin'ny zavatra rehetra amin'ny filazalazana ny famonjena ara-panahy noraisintsika tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. (Filipiana 1:28, 2 Kor 7:10 EFE 1.13)
Hitantsika fa ny dikan 'izany teny izany dia afaka ny ho ara-panahy na ny famonjena, ary ny famonjena ara-batana avy amin'ny vonjimaika loza na toe-javatra. Ny GT indrindra ny ara-batana dia loza raha ny ankamaroan'ny ny NT mijoro ho fahatsapana ny famonjena ara-panahy.
Ny Testamenta Vaovao dia nosoratana nandritra ny 60 taona, ny mpanoratra samihafa. Ny hevitry ny teny hoe famonjena (soteria) dia azo adika na momba ny fotoana teny voasoratra, ny alalan 'izany ny mpanoratra nampiasa ny teny.
Nanoratra ny taratasiny i Paoly nandritra ny 20 taona, ary Noho izany dia voajanahary fa ny teny misy mijaly ny sasany ny maha zava-dehibe ny fiovana rehefa mandeha ny fotoana. Mifanohitra amin 'ny sasany tamin'ireo Paoly tatỳ aoriana taratasiny ho an'ny Romanina, ohatra, ny teny izay efa nampiasaina hatrany amin'ny zava-dehibe ny famonjena ara-panahy, dia ny taratasy ho any Tesalonika, iray amin'ireo taratasy voalohany Paoly.
Paoly taratasy aloha
Ao amin'ny taratasy voalohany Paoly taratasy ho any Tesalonika sy Galatia, tsy nampiasa ny teny hoe 'Soteria' mba haneho ny famonjena ara-panahy. Ny teny ihany koa fa tsy James, izay voasoratra ihany koa ao amin'ny iray Vao nanomboka teo amin'ny tantaran'ny Fiangonana. I Paoly, fa tsy mampiasa teny hafa, nandritra izany fotoana izany mba hilazana fe-potoana ara-panahy famonjena toy ny hoe "kaleo" Gal 1: 6, "Dikaio-Oe" Gal 2:16, "exagorazo" Gal 3:13 sns
Tsirairay toko 1 sy 2 Tesalonianina hamoaka misy dia midika ny fiverenan'i Jesosy, ary Paoly fampianarana any am-parany. Toy izany koa ny teny hafa mifandray amin'ny mino fa izany famonjena izany i Paoly ao amin'ny 2 manondro Tesalonianina 2:13, ary mampahafantatra ihany koa ny tohin'ny ny lohahevitra, Paoly dia mampianatra.
Ny famerenana ny 2 Tesaloniana toko faha-2 fa toko faha manome:
1. fampitandremana (and 1-3)
2. apostasia (and 3)
3. tan-dalàna mivoaka (and 3-5)
4. Ny mihazona indray (and 5-7)
5. Antikristy performanc sy tonga (and 8-9)
6. Fiheveran-diso sy ny fahadisoam-panantenana ny olona (andininy 10-12)
7. A Soa Tompo, ary ny antso (and 13-15)
Tanatin 'i Paoly manoratra ary maneho ny fankasitrahana ny Tompo ho famonjena fa Andriamanitra dia vonona ny zavatra; dia tsy maintsy ho hita ao mazava ny fampianarana teo aloha ao amin'io toko io ihany. Amin'ny teny hafa, dia tsy misy foto-kevitra vaovao manomboka hiteny Paoly, na fisaorana, fa fotsiny ny fitohizan'ny hafa momba ny lohahevitra dia efa nampianatra nandritra ny taratasy.
Ny voninahitra ho avy
2 Tesalonianina 2:14 - Izao no lazain'i Andriamanitra efa niantso anareo tamin'ny filazantsaranay, mba handresy an'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitr'i
Ny andininy manaraka hitantsika eny amin'ny 2 Tesaloniana 2 dia miresaka momba ny hoavy voninahitra ao amin'i Kristy. Izany no voninahitra Paoly miresaka ny ao amin'ny 1 Korintiana izay "ny simba tsy maintsy hitafy ny impermanence," ary "ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana."
Koa izao no fanondro uppryckelsens amin'izao fotoana izao sy ny hoavy voninahitra, toy ny mitranga amin'izao fotoana izao, rehefa misintona ny Tompo ny fiangonana ho azy, ary manova ny vatantsika mba ho tahaka azy. Io andininy io dia tohin'ny andininy faha-roa ambin'ny folo lahy, sady toy ny mazava rohy mankany uppryckelsens andro.
Paoly dia manambara fa alohan'ny andron'ny Tompo na ny fahoriana mety ho, manana ilay tena mpandika lalàna (ny Antikristy) ho avy aloha. Fa ny ny Antikristy, dia ho afaka handroso, dia tsy maintsy mihazona azy niverina avy any amin'ny ilany (ny Fanahy Masina), ary ny Fanahy Masina mba ho afaka ho tonga amin 'ny toerana dia tsy maintsy Fivoriambe voalohany dia nesorina ka mandehana eto an-tany.
Jesoa manondro ny maro mpandray anjara mba hanaraka ny hita maso hiverina eto an-tany. Fa ny fampakarana dia unsigned fisehoan-javatra, ary ny fiangonana dia tsy ny antso miandry ny Antikristy, na ny fanekena tamin'ny Isiraely, fa mba 'hiandry ny Zanany avy any an-danitra. "
Isika dia miaina ao anatin'ny hiandry foana fa ny Tompo dia ho avy tsy ho ela haka anay an-trano, mba hamonjy antsika amin'ny fahatezerana ho avy, ary ho antsika hiaraka Aminy mandrakizay.
Avy tsy ho ela i Jesosy!